Iphrofayili yeeNqununu 'Ii-80 zePop Metal Metal Band Quiet Riot
I-Quiet Riot Profile
Ngo-1975 eLos Angeles, eCalifornia
Amalungu amaBakala angama-80:
Kevin DuBrow (owazalwa uKevin Mark DuBrow ngo-Oktobha 29, 1955 eLos Angeles; wafa ngoNovemba 19, 2007 kuLas Vegas, eNevada)
UCarlos Cavazo (ozelwe nguCarlos Eric Cavazo ngoJulayi 8, 1957 eMexico City, eMexico) - AmaGitta, amazwi okuxhasa, umbhali wengoma
URudy Sarzo (owazalwa ngoNovemba 18, 1950 e-Havana, eCuba) - I-guitar ye-Bass, ilizwi lokuxhasa
UFrankie Banali (owazalwa ngoNovemba 14, 1951 eQueens, kwisixeko saseNew York) - Iidubhu, amazwi okuxhasa, umbhali wengoma
Amanye aMqoka 'Amalungu ama-80:
UChuck Wright (owazalwa ngoSeptemba 13, 1959 eLos Angeles) - Gitare yaseBass, umbhali wengoma
Ukuba akukho nto, iimbali ezinomtsalane, ezinomdla we-Quiet Riot zikhonza njengenye yeembali ezinomdla kakhulu kunye neengqungquthela zexesha lonke. Ukuqala njengenguvulindlela ye-LA enesisindo esikhulu kunye nesithuthi esilungu elisekayo kwaye ekugqibeleni i-guyist Randist Rhoads, iqela layakhela ngokumangalisayo isenzo sesibini se-superstar esekelwe kumandla omntu wexesha elide le-frontman DuBrow. Kodwa ke loo nto ixelela inxalenye yendaba. Ekugqibeleni, ingxelo ye-band's-or-famine 'ye-80s ibonisa njengengqungquthela enzima kwaye ingalindelekanga ukuba iphinde ibuyele intsomi, kodwa iqela libuye liphumelele ukubuyela ngokuphindaphindiweyo ngexesha lama-90 kunye ne-00s - ngokudabukisayo yonakaliswa ukufa kweziyobisi I-DuBrow ngo-2007. Ngokumangalisa ngokwaneleyo, isenzo sesine se-Quiet Riot siyaqhubeka, njengoko uBanali uye waqhubeka nokukhokela umgca (kunye neengcezu zamathandabuzo aqhubela phambili) azama ukuhlonipha umgca we-four-year band of persistence.
Ukuba oko kuzwakala ngathi isishwankathelo esiyinkimbinkimbi, zikhululeke ukuphanda iinkcukacha malunga neengcambu ezithintekayo.
Ngokucacileyo, i-Quiet Riot yayingomnye wee-first-class Sunset Strip zesebe, ezijongene nokutshisa indlela eya kuhamba emva kweminyaka emnandi emva kweemiphakathi ezazinokuphanga kakhulu.
Uqale u-Rhoads kunye ne-bassist uKelly Garni, ibhendi yongezelela i-DuBrow ngo-1975, malunga nexesha elifanayo liyamkela igama layo eliqhelekileyo ngoku. Ngona negama linembali engabalulekanga, kodwa nangona iholele indlela yamagqabantshi amaL rock angamaqhosha aseVan Halen ukuya eMotley Crue , ukulungiswa kwangaphambili kwakungekho inhlanhla yokufumana inkontileka yerekodi yase-United States. Ngenxa yoko, ii-albhamu zokuqala eziphuma eJapan (equka neRhoads) zihlala zilukhuni kunzima ukuva nanamhlanje. Enyanisweni, iimeko ezingama-80 ze-Quiet Riot ziphantse ziphelile ngaphambi kokuba ziqale, xa uRhoads ephengulule ukuba aphengulule umculi wegitare e- Ozzy Osbourne emva kwe- Black Sabbath band ngo-1979 kwaye wayilondoloza. NgoRodads ngaphandle (kunye noSarzo ngokukhawuleza emlandela e-band yase-Osbourne), ithemba likaDuBrow lokuguqulwa kwamatye kunye nokugqithiswa kwalo lalibonakala liphelile - kwaye bekungayi kuvuswa iminyaka ecishe ibe mithathu.
'IMpilo yeMnxeba' kunye ne-Mid-'80s Peak:
Ngokuchasene neengxaki ezininzi, u-DuBrow waqhubeka nokufana nomsebenzi ophakathi komlotha owamncedisa, ekuqalekeni ezama ukunyamezela abasebenzi abasha kunye nokuqasha uCazozo noBanali ukuba badlale kulo nto ayecinga ukuba yayiyiqela lakhe. Ngokumangalisayo, i-Rhoads yokufa ngokunyanisekileyo ngo-1982 ukuphahlazeka kweendiza yaba yintsikelelo ekhethekileyo ye-Quiet Riot, njengoko i-Sarzo iphinda ifumaneke (kwinkqubo yokucima i-Wright) ukujikeleza umgca we-80s.
Ngaphandle kwesizathu sokuzikhandla, iqela elitsha liqalise ukurekhoda iingoma kunye kunye nokuvuselela igama likaRiet Quiet ngohlobo oluthile lokuhlawula i-Rhoads. Oku kwenzeka emva koko kwakungalindelekanga kwihlabathi lonke, njengoko iqela lagqitywa ngokusayina i-US record record ngowe-1982 kwaye yagqitywa iMpilo yeMetro emva kweenyanga ezintandathu. Ngaphezulu nangengqiqweni, irekhodi yayiyi-smash eyakhayo, ekugqibeleni yaba yi-albhamu yesalathisi yokuqala yaseMerika ukubiza indawo ephezulu kwi-chart ye-albhamu yeshadi. Ngenxa yokuphulukana ngokukhululeka kokuphumelela "ubusuku", mhlawumbi kwakungenakukhunjulwa ukuba ukuhla kwehla kwakuza kufutshane ngokukhawuleza emva kokuba i-Quiet Riot ifikelele kwindawo engaphambili engenakucingelwa.
I-'80s Chaos 'kunye ne-Swift Collapse:
Iqela elitsha lamaqela e-LP, ngo-1984 leMeko eqingqiweyo, ilandelwe ngokukhawuleza, inandipha impumelelo enkulu kodwa ingenayo imbonakalo ebonakalayo emlonyeni we "Cum on Feel Noize" kunye ne "Bang Head yakho (iMpilo yeMetro)" ngeli xesha.
Ukongezelela, ayizange incede ukuba iDuBrow ngeli nqanaba lithetha rhoqo kwiphephandaba ngokunyaniseka ngokubhekiselele kwimizila yamatye esanda kuvela evelayo azivale ekhwele ngokungabonakaliyo kwi-coattails ye-Quiet Riot yonyaka ogqithiseleyo ogqithiseleyo. La maqela ahlukeneyo angama-LA, abalandeli be-Quiet Riot, kwaye-yee-e-hard rock press. I-band friction yangaphakathi yakhula, kwakhona, ngo-1986 ukukhululwa kwe-QR III Sarzo kwaphinda kwaphuma kwakhona, emva koko kujoyina umgca omtsha we-David Coverdale's Whitesnake . UWright ubuyele kule ngongoma, kodwa ngaphaya komnyaka uBanali noCazozo bamkhwelise iDuBrow ngaphandle kweyona nto yayisisigxina sakhe. Kwaye ngoko ukuwa kwebhola kweqela kwakungaphelelanga.
Ukufa kweClass Frontman, Emva koko kuzalwa kwakhona ?:
Ukulandela i-albhamu engabonakaliyo ye-1988 kunye ne-foreman entsha, i-Quiet Riot yaphela ngokupheleleyo, ivalwe ngokupheleleyo kwi-'80's 'ukuqhuma kweenwele zithandwa ngabantu. Kwiminyaka embalwa kamva i-80s yangundoqo yatshintsha ngokungafaniyo kwayo, kwaye ngo-1993 yonke into kodwa uSarzo wahlangana kwakhona ukuze aphinde avuselele iqela kwakhona. USarzo ngokwakhe wabuyela kwiminyaka embalwa malunga nokuphela kweminyaka elishumi, kodwa umgca weklasi awuzange uhlale ixesha elide kwi-millennium entsha. Ekugqibeleni, i-DuBrow kunye neBanali yahlala yimizuzu yodwa njengoko iqela lixhotywe ngabadlali abancedisayo ngokukhawuleza. I-albhamu entsha ye-studio yavela ngo-2007, kodwa ekupheleni komnyaka u-DuBrow wayefile, kwaye kwakubonakala ngathi ngeli xesha i-Quiet Riot kwafuneka iphumelele. Kodwa emva kokuqala ukuxhamla kwi ngcamango, uBanali uye wagxininisa ekuqhubekeni phambili kunye nenkolelo yeqela.
Kwaye ngoku, abathathu abakhokeli bezakhono bahamba phambili, i-Quiet Riot iyaqhubeka nokunyanzela ifa elityebileyo, elincinci elisekho njengelinye elimangalisayo, elide kakhulu elide "eliphumelelayo" kwiimbali zomculo.
Iigrama zeGraam 2016 Ingxelo Yomnyaka Otyunjweyo
Iingoma eziphakamileyo zeeNkcazo zika-2006 no-2007
Iingoma ezi-10 eziphambili zeRap-Rock Songs
I-10 I-Best Jackson iisampula ze-Michael Jackson kwi-Rap
Ngama-2016 ama-Award Academy Awards aphezulu abaQeshwayo beeNgoma
IiDayimari zeMculo ezili-10 eziphezulu
Iingoma ezi-10 eziphezulu zoBomi
Iingoma ezi-10 eziphezulu ze-OneRepublic
Impendulo kwiZifundo zoNxibelelwano
Yintoni iPlastiki ejongene nayo?
Iziphakamiso zeenqununu zokubonelela ngenkxaso yootitshala
I-Mass Percentage Definition kunye neMzekelo
Ukwahlukana phakathi kweNdlela, iMidian kunye neMode
I-Mimesis Inkcazo kunye nokuSebenza
I-semi-Open Semi-Western Forehand
IiJokes zeJoe Biden
Iimviwo zeSampula Iibrari zeeNqununu zootitshala
Ziziphi 'Iingcebiso' Kwinqanaba leGalofu?
Iziphakamiso ze-Movie Top 12 ze-German zokukunceda Ufunde isiJamani
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala zaseSpeyin
Ray Boltz Iingoma